Musiibada Dhaawacyada Barcelona Oo Halkeeda Kasii Socota &
Ousmane Dembele ayaa ku biiray liiska dhaawacyada Barcelona kaddib markii ay waxyeello kasoo gaadhay ciyaartii Atletico Madrid ee Sabtidii, taas oo ay kooxdiisa kasoo gaadhay guul-darro 1-0 ah.
Kulanka ka dhacay garoonka Wanda Metropolitano ayaa Barca ku noqday musiibo u horseeday dhaawacyo, waxaana shalay ay kooxdu xaqiijisay in labadeeda ciyaartoy ee Gerard Pique iyo Sergi Roberto ay dhaawacan yihiin, isla markaana uu difaaca reer Spain uu xili ciyaareedka oo dhan maqnaan doono, halka uu Roberto muddo laba bilood ah bannaanka joogi doono.
Barcelona ayaan war rasmi ah kasoo saarin dhaawaca Ousmane Dembele, hase yeeshee warbaahinta Spain ayaa baahisay in garabka uu dhaawac kasoo gaadhay mar ay isku dhaceen Yannick Carrasco, intaa wixii ka dambeeyeyna uu tababare Ronald Koeman isha ku hayay.
Inta uu le’eg yahay dhaawacan ayaan wali rasmi ah loo ogaanin, laakiin Wargeyska Mundo Deportivo ayaa sheegay in baadhitaano laga qaaday Axadda shalay, isla markaana aanay kooxdu wali soo bandhigin.
Warku wuxuu intaa ku daray in maadaama aanay Barca ka hadal dhaawacan, ay taas macnaheedu tahay inay kaliya jug ku kooban tahay oo laga yaabo inuu ciyaari karo kulamada soo socda, halka warar kalena ay sheegayaan inuu seegi doono kulanka Salaasa habeen dambe ee Dynamo Kiev, taas oo haddii ay dhacwado madax-xanuunka kusii kordhin doonta tababare Ronald Koeman.
Inkasta oo uu Philippe Coutinho usoo laabtay, haddana dhaawaca Ousmane Dembele oo ka daba tegay Ansu Fati oo lagu sii daray difaaca dhibaatu ka jirto, waxay wiiqaysaa awoodda Barcelona oo marka horeba mashaqo ku dhex jirtay.
The UN requires Ethiopia’s 72-hour civil safety deadline for Tigrayan forces
Kororka Koroona & kala sareynta Dalalka Caalamka! –